Iminyaka engama-75 kwemihlanu, isaga sezingane zakudala zika-Enid Blyton | Izincwadi Zamanje
Iminyaka engama-75 kwemihlanu, isaga sezingane zakudala sika-Enid Blyton
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, Izincwadi Zentsha
Septhemba 11, edlule iminyaka 75 kwashicilelwa i-adventure yokuqala yomunye wemigilingwane edume kakhulu yezincwadi zezingane nezabantu abasha emibhalweni. Kwakungukuthi Ingcebo yesihlanu nesiqhingi. Futhi ngaphezu kwalokho, kufezekile nakulo nyaka ama-120s ukuzalwa komdali wayo, umbhali ovelele waseBrithani Enid Blyton.
Ishicilelwe ngaphezu kwe- Izilimi ezingama-90, the izinhlelo, ukukhishwa kabusha nokuzivumelanisa nezimo Ithelevishini yalolu chungechunge lwezincwadi ayinakubalwa. Abakaze ngaphandle kwengxabano ezikhathini zamuva. Kepha i izizathu sempumelelo yayo isenamandla yingakho kucishe kuthengiswe amakhophi acishe abe yisigidi ngonyaka.
En Ingcebo yesihlanu nesiqhingi Bafowethu UJulian, uDick, u-Ana kanye nomzala wabo uGeorgina nenja yabo uTim chitha ihlobo ucwaninga amagugu bese uthola izimfihlo eziyinkulungwane neyodwa ku Isiqhingi saseKirrin. Yile ndlela ubungani obuzokhula ngayo obuzokhula buqine nge-adventure ngayinye entsha.
Y njengoba zinjalo Abahlanu? Kulungile Julian yiyona enkulu kunazo zonke futhi ende kunazo zonke, uhlakaniphile futhi unesibopho. Dick mhlawumbe kungcono kakhulu onobuqili futhi uyisihlathi, kodwa futhi unomusa kakhulu. Ana, omncane kunabo bonke, unakekela imisebenzi yasendlini okufanele ngikwenze. Y Georgina ngifuna ukuba njengomfana futhi uncamela ukubizwa Jorge. Uphinde abe nesibindi. Y Tim, kunjalo, leyo yinja kaGeorge, onesibindi njengaye futhi ethanda wonke umuntu.
1 Izizathu zokuthi kungani sibathanda
2 Uchungechunge lonke
3 Ukulungiswa kwethelevishini
4 Umbukiso wentela ePortugal
Izizathu zokuthi kungani sibathanda
Futhi sisabathanda ngoba:
Safunda ukufunda nabo. Futhi izizukulwane ezintsha ziyaqhubeka nokwenza kanjalo.
Sihlola okokuqala. Ngokwemvelo, ezindaweni eziyimfihlakalo, emihumeni nasezindaweni ezikude, izindlu ezilahliwe ezinamaphasishi ayimfihlo afihle imfihlo engaphezu kweyodwa.
Sithola indlela yokuthanda nokunakekela izilwane. Ubani owayengafuni ukuthola inja efana ne-tim, umngane ongakhathali wama-adventures?
Sadla wonke ophaya benyama owomhlaba, amasemishi wesinkwa esithambile, amasemishi, ama-sarsaparillas noma ama-lemonade.
Kwakungekho abadala ukunikeza ikani ngemithetho, imisebenzi noma izibopho. Kuvele nje ukuthi balungiselele lokho kudla okucebile nokuchichimayo noma amadina. Abahlanu bebengenza abakuthandayo ngaphandle kwabo ngemuva kwabo. Futhi sazizwa sikhululekile njengabo. Kepha baphinde basifundisa ukuthi siziphathe kahle futhi sifunde nemiphumela izenzo zethu ezingaba nayo.
I-Los izimpikiswano beziziphetha, kodwa babehlala benazo zokuziphatha (noma ngokuziphatha, kumongo wamanje) futhi ihlale isolisa. Vele, abantu ababi bahlala belahlekile futhi abahle bahlala benqoba. Ngamanani wokugqamisa kanjalo ubungani, ukwethembeka, umzamo nokusebenzisana noma yini yayingenzeka.
Igugu lesihlanu nesiqhingi (1942)
Okunye Ukuzidela Kwabahlanu (1943)
Abayisihlanu Baphuma (1944)
Abayisihlanu eSmuggler's Hill (1945)
Abahlanu abaseCaravan (1946)
I-Five Again esiQhingini saseKirrin (ngo-1947)
Abayisihlanu baya ekhempini (1948)
Abahlanu basenkingeni (1949)
Abayisihlanu ebusweni be-adventure (1950)
Impelasonto Yesihlanu (1951)
Abayisihlanu banesikhathi esimnandi (1952)
Abahlanu ngasolwandle (1953)
Abahlanu Ezweni Eliyimfihlakalo (1954)
Abayisihlanu Bajabula (1955)
Abayisihlanu ngemuva kwendinyana eyimfihlo (ngo-1956)
Abayisihlanu eBillycock Hill (1957)
Abahlanu Abasengozini (1958)
Abahlanu abaseFiniston Farm (1960)
Abayisihlanu kuDeveli's Rocks (1961)
Abahlanu kufanele baxazulule imfumbe (1962)
Abahlanu Babuye Baphinda (1963)
Okudume kakhulu (futhi leyo sonke esiyibonile) kwakuyi- Uchungechunge lwaseBrithani 1978 ngeziqephu ezingama-26 ezinkathini ezi-3, ezinamazwi ka U-Enrique no-Ana ekuguqukeni kwengoma kanhlokweni. Kwakunenye kamuva 1996, umkhiqizo owenziwe ngokubambisana wase-UK, Canada nase-Germany. Futhi ngeziqephu ezingama-26 ezikhathini ezimbili.
Umbukiso wentela ePortugal
Kusuka ku Julayi 24 kuya ku-Okthoba 7 izwe elingumakhelwane liyabonisa ku I-Biblioteca Nacional de Portugale Lisboa, umbukiso ngokunembile ngalo mcimbi. Isihloko, U-Enid Blyton (1897-1968): iminyaka engama-75 kwabahlanu, ubuyekeza impilo nomsebenzi walo mbhali jikelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izincwadi Zentsha » Iminyaka engama-75 kwemihlanu, isaga sezingane zakudala sika-Enid Blyton
Amathiphu ama-5 wokubhala indaba emfushane
"4 3 2 1", entsha evela kuPaul Auster